Izifundo ze-congress ye-Surveying of Guatemala-Geofumadas
NgoNovemba, 2011 cadastre, Ukufundisa i-CAD / GIS, UkuCwangciswa kweziThili
Ndayigqiba ICongress of Administration Land and Surveying eyenziwe eGuatemala, inyanga edlulileyo, sele iphoswe ukubonisa iintetho. Zifumaneka kwiphepha elilodwa, nangona kungcono ukuzibona kwiSlideshare, ukusuka apho zingayilanda khona.
Ndiyasikisela ukukhuphela kunye nokuyigcina kwifayili yakho, kucinga ukuba ngeli xesha akukho mntu uqinisekisa into ekhoyo kwiwebhu. Kwakhona kunokubaluleka okukhulu okunokusetyenziswa xa uqeqesho kwindawo yendawo.
Emva koko ulungele abo bafumanekayo, ngokulandelana kweso sihloko.
Indlela yokufikelela kwiConcept Development Territorial
UDkt. Rafael Zavala Gómez ABAKHULU
Amathuba okuphuhlisa ummandla kwimimandla yasemaphandleni.
Amava aqaliswe yimibutho ehleliyo.
UDkt. Cesar Eduardo Ordoñez,
Imingeni yasemaphandleni nasezidolophini zaseGuatemala zeZikhulu ezingama-21
kunye nezixhobo zokucwangcisa kunye nokulawulwa kwendawo
Violeta Reyna, uMlawuli woLawulo lweMhlaba SEGEPLAN
E Isibongo soLawulo lweMhlaba eGuatemala
UJean Roch Lebeau
Ukujonga ngokucacileyo oko benzayo eGuatemala; Uxelelwe ngumntu owayekho ukususela ekuqaleni kweli nqanaba elitsha.
Ezininzi iingxaki ...
I-cadastre njengesixhobo sokuphuhlisa ummandla
Diego Erba, iLincoln Institute for Administration Land
Kuhle kakhulu, kubonisa indlela iCadastre eguquka ngayo, kwaye ibaluleke kakhulu ukudibanisa rhoqo okunikezelayo ukukhuthaza umsebenzi we-Lincoln Institute okanye iimpapasho.
C Yabelana ukuphumelela: indima yolwazi ngokulawulwa kwendawo
U-Diego uyayilungisa kule nto, ndiyayithanda indlela yakhe yokubonisa, enefuthe elibonakalayo elibonakalayo. Nangona ukuba awukho kwisiganeko ... waphoswa phantse yonke into.
Ulawulo loMhlaba eNetherlands
UMartin Wubber, iKadaster
Lo mboniso ubonisa indlela iCadastre esebenza ngayo eNetherlands. Umxholo ohluke ngokupheleleyo kwiwethu, kodwa apho iinkqubo ezifana ne-CNR e-El Salvador ziphefumlelwe.
Uphuhliso kwihlabathi lokulawulwa komhlaba: iimodeli zesizinda ekulawuleni umhlaba, i-cadastres kwi-3D kunye nokubhalisa okubalulekileyo
UMartin Wubbe, iKadaster
Inomdla obomdlayo, kwimizila enokuthi isihloko se-3D sithatha kwiCadastre. Usizi, ukuba kwimeko yethu ayiyona nto ephambili xa i-2D isengumngeni, nangona kunjalo kuyakunceda ukwazi ngenxa yokuba amazwe athuthukile aya khona. Kwakhona ukukhangwa kwiidolophu ezinkulu, ezifana neMexico City, Bogotá, ukunika imizekelo yimeko yethu apho ingxamisekileyo.
Ukusetyenziswa kolwazi lwe-cadastral njengesiseko socwangciso lokusetyenziswa komhlaba
Eddy Diaz, Registry yeCadastral Information
IiCadastres zikamasipala -Intetho okanye intloko yezixeko zethu?
I-Lincoln Institute for Administration Land
Inomdla, isampula ebalulekileyo kwimephu yexabiso le-cadastral; Umngeni wakho wokuhlaziya.
Ukuqaliswa kobuchwepheshe obutsha kwiiprojekthi ze-cadastral zommandla
Le yinkcazo yethu, kwimiba eyenzekayo kumxholo waseMbindi waseMelika ngokusetyenziswa kobuchwephesha bolawulo lwemihlaba.
Iinkcukacha zeenkampani kunye nolwazi
UJavier Morales, ITC
Oku kungesiNgesi, iphepha elinomdla wokwakhiwa kwedatha ngokusetyenziselwa uluntu. Umzekelo osisigxina kakhulu kule Maphu evulekileyo Sreet.
Ngelixa umxholo ubonakala u-astral, ulawulwa kakuhle nguJavier owaziyo ukuba iqela kuba udla ngokuza ukufundisa izifundo okanye iinkomfa. Ukubonakalisa okuhle kakhulu ekugqibeleni, endikugqibileyo kwintetho buyela kwinkunzi.
Ukusetyenziswa kunye nokuSebenza kweeGoservice ze-IDE
Bobabini kunye nale ntshumayelo elandelayo bayilungele ukukwazi ukusebenza kunye nemigangatho yemigangatho ye-OGC.
ISINYE: isinyathelo sokuqala se-SDI eGuatemala?
Inkcazo yeklasi, ebonisa indlela i-geoservice eyenziwe ngayo eGuatemala. Inomdla wokwamkela i-gvSIG iye yaba nayo njengomthengi we-IDE, kunye ne-MapBender add-on; GeoServer / Apache ukulawula iWFS kunye neMapServer yeWMS / WCS.
Umsebenzi omkhulu we-SEGEPLAN kunye KwiYunivesithi yeSan Carlos, ngokugcina lo mbandela uphila kwindawo.
Jonga iintetho kwiphepha leCongress
Jonga iintetho kwiSlideshare
Post edlulileyo«Edlulileyo I-Bentley I-model, ukusebenzisana nge-ODBC
Post Next Yenza ukuhlelwa e CivilCADOkulandelayo "